एमाले र माओवादीको एकता कहिले हुन्छ ? ओली र प्रचण्डले गरे नयाँ खुलासा « Deshko News
एमाले र माओवादीको एकता कहिले हुन्छ ? ओली र प्रचण्डले गरे नयाँ खुलासा
विगत छ दशकदेखिको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निर्वाचनलगत्तै एकीकृत गर्ने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संकल्प गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “जतिसक्यो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी विधिवत् एकीकृत पार्टी निर्माण गरिनेछ ।”
एकता प्रयत्न विसं २००७ देखिको भएको उल्लेख गर्दै दुवै पार्टीले एकताको पहल नेपालका आम न्यायपे्रमी, प्रगतिशील र देशभक्त जनताको सम्मानको परिचायकका रुपमा चित्रित गरेको छ ।
दुई पार्टीपछि मुलुकका जनतामा रहेको गरिबी, अभाव, पछौटेपन, भेदभाव र असमानता समाप्त गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
एकता राष्ट्र पुनःनिर्माण गर्ने संकल्पको द्योतक भएको उल्लेख गर्दै सबै कम्युनिस्टका अतिरिक्त सबै वामपन्थी, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादीलाई एकताका लागि घोषणा पत्रमा आह्वान गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहित समाजवादउन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देश गरेको भन्दै संविधानको मार्गनिर्देशबमोजिम अगाडि बढ्न दुई पार्टी प्रतिबद्ध छ, भनिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रूपमा रहने उल्लेख गर्दैै घोषणापत्रले समाजवादमा राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिने बताइएको छ ।
कानूनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिनुपरेकाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न लिएर जनताबीच जान नसकिएको पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । रासस